I-Alphabet yesiJalimane, i-Alphabet yaseJalimane, i-Das Deutsche Alphabet
Esifundweni sethu se-German Alphabet, sizohlola izinhlamvu zesiJalimane, ngenkathi sihlola izinhlamvu zesiJalimane, sizofunda nokuphinyiswa kwezinhlamvu ezise-alfabhethi laseJalimane njengencwadi ezimele nokubizwa kwazo egameni. Izinhlamvu zamagama zesiJalimane i.e. das Deutsche Alphabet Ukufundisa kubaluleke kakhulu ikakhulukazi kwabaqalayo ekufundeni isiJalimane, kufanele kufundwe ngokucophelela.
Okwamanje, sizobona ukuphimisela okuhlangana nezinhlamvu ezithile zesiJalimane, Sizobona izinhlamvu zesiJalimane ezingekho ngesiTurkey, nezinhlamvu ngesiTurkey ezingekho ngesiJalimane., sizogcizelela esikushilo ngezibonelo futhi ekugcineni sizoqeda isihloko sethu ngokuhlolwa kwesihloko sezinhlamvu zesiJalimane.
I-Alphabet yesiJalimane: Okungenani ama-20 Amaminithi
Kubani: Abafundi bePhakeme naBasekondari, i-9. AbaFundi BeBanga, Abaqali be-German
Ngemuva kokubuyekeza ngokucophelela amagama alfabhethi esiJalimane, sincoma ukuthi uxazulule ukuhlolwa okuncane ekupheleni kwesihloko sethu.
I-ALFABE EJERMANE (DAS DEUTSCHE ALPHABET)
Okokuqala, ake sibone izinhlamvu zezinhlamvu zesiJalimane ndawonye etafuleni, bese sihlola izinhlamvu ngayinye ngayinye. Kunezinhlamvu ezingu-30 ku-alfabhethi yesiJalimane kanye nezinhlamvu ezikhethekile. Kunezinhlamvu ezingama-26 nezinhlamvu ezikhethekile ezi-4 ku-alfabhethi yesiJalimane.
a: aa g: ge m: em r: u-er w: thina
b: be h: ha ne s: es x: ix
dkusukela j: ok ö: u: uu z: setha
e: Yebo k: ka p: pe ü: ä: a
f: ef l: the q: qu v: fau ß: isethwe
Hlola zombili izinhlamvu ezincane nezinhlamvu ezinkulu ku-alfabhethi laseJalimane ngokucophelela kusuka esithombeni sezinhlamvu zamaJalimane ezingezansi.
Izinhlamvu ZesiJalimane - Izincwadi ZaseJalimane
Kunezinhlamvu ezingama-26 nezinhlamvu ezikhethekile ezi-4 ngesiJalimane. yalezi zinhlamvu ezikhethekile Izinhlamvu u-Ä, Ö kanye no-Ü ziyizinhlobo ze-umlaut zezinhlamvu A, O kanye no-U. Ngokuvamile, ayivezwa ngama-alfabhethi, ikhonjiswa ngokwehlukana.
Uhlamvu ß (estset) lisho nokuthi s. Kuyabonakala futhi ukuthi kubhalwa ama-SS (double s) esikhundleni sale ncwadi kwezinye izindawo. Uhlamvu ß luhlala lubhalwa ngosonhlamvukazi, uma kungonhlamvukazi abakhulu, lubhalwa njengo-SS. Isibonelo, uma ufuna ukufaka osonhlamvukazi kuzo zonke izinhlamvu zegama ngohlamvu ß kulo, uhlamvu ß kufanele lubhalwe njenge-SS.
Usonhlamvukazi wencwadi i ngesiJalimane yincwadi I, hhayi incwadi I. I-capital i letter (İ) itholakala ngesiTurkey kepha hhayi ngesiJalimane. Kukhona nencwadi encane ebhalwe ngesiTurkey kepha hhayi ngesiJalimane. NgesiJalimane, njengaseNgilandi, incwadi R ngokuvamile ayikhulunywa ngomfutho ophakeme kakhulu.
Ukufunda nokubhala amakhodi ngesiJalimane
Bheka isithombe esikulungiselele sona.
Manje ake sibone izinhlamvu ezifabhethi zesiJalimane kanye nokufundwa kwazo:
ß: is set
Izinhlamvu ezifabhethi zesiJalimane zifundwa futhi zifakwe ikhodi kulesi sibalo ngenhla.
Uma othile engakubuza ukuze encode igama lakho, kuzomele uqale angashadile kusuka izinhlamvu esephepheni egameni lakho njengoba ngenhla.
Sithe azikho izinhlamvu Ç, Ğ, İ, Ş ku-alfabhethi laseJalimane. Uma kunencwadi egameni lakho engekho ezinhlamvwini zamaJalimane, njenge-Ç-Ğ-Ş, njengezibonelo zeMODERN, YAĞMUR, ÇAĞLA, lezi zinhlamvu zifakwa kumakhodi ngesiJalimane ngaphandle kwamachashazi. Ngakho-ke udinga ukufaka ikhodi kuhlamvu Ç njengo-C, Ğ njengo-G, no-Ş njengo-S.
I-German Letter Coding
Izincwadi ezingekho ku-Alphabet ze-Alphabet ze-German
Izinhlamvu ze-Q, W, X, Ä, ß ezincwadini zama-German azitholakali ngolimi lwesiTurkey.
I-Alphabet ye-Non-German ku-Alphabet ye-Alphabet
Elisendaweni zamagama-Turkish e zamagama O isiJalimane, G, S, mina, Ngithanda izinhlamvu khona zamagama-German.
Ukufunda Izincwadi ZaseJalimane Ngolwazi
Ezinye zezinhlamvu ezisehlangothini elihlangene nalokhu okulandelwayo okulandelayo zivame ukusetshenziswa:
ei : e futhi ngivela eceleni ay njengoba kufundwa
ie : Uma mina no-e behlangene i njengoba kufundwa
eu : e bese uvela eceleni oy njengoba kufundwa
Sch : incwadi, incwadi c kanye nencwadi h iyahambisana ş njengoba kufundwa
ch : Uma incwadi c no c zivela eceleni h njengoba kufundwa
z : Z incwadi ngaphakathi kwegama ts njengoba kufundwa
au : a bese uvela eceleni o njengoba kufundwa
ph : p no h bahlangene f njengoba kufundwa
sp : s futhi p zihlangene pancreatitis ezinzima njengoba kufundwa
st : Uma s kanye no-t behlangene PIB njengoba kufundwa
s : Uma ngabe ekuqaleni kwegama z like, ekugcineni s funda njenge
Kukhona okunye okungafani nemithetho engenhla yokufundwa, nakuba ngamanye amazwi izinhlamvu zingase zibe nezinkulumo ezihlukile kuye ngokuthi ngabe izinhlamvu zivela ekuqaleni noma ekupheleni kwegama.
Isithombe esilandelayo sikhombisa indlela yokufunda amagama ngezinye izincwadi eceleni.
Indlela Yokufunda Amazwi EsiJalimane
Ungazifunda Kanjani Izincwadi ZaseJalimane
Qaphela: isiJalimane ä, ü, ö izinhlamvu (AUOyi-umlaut (ichashazi).
Abangane abangenazo izinhlamvu ezikhethekile kwikhibhodi yabo bangabhala lezi zincwadi kumakhompyutha abo besebenzisa inhlanganisela eyinhloko elandelayo.
ä uhlamvu: ALT + 132 (Alt + 132 imele i-132 ne-Alt key)
ß uhlamvu lwe-ALT + 225
Abangane bethu abangewona isiTurkey nabo bangasebenzisa izinhlamvu zaseTurkey kanje:
Mina: ALT + 0253
Mina: ALT + 0221
Incazelo yethu yesihloko sezinhlamvu zezinhlamvu zesiJalimane yilokhu okwamanje, bangane abathandekayo. Ngokufunda kahle izinhlamvu zesiJalimane, udinga ukukhumbula kahle izinhlamvu, ufunde ukuphinyiselwa kwezinhlamvu zesiJalimane, ikakhulukazi ukuphimisela okwenzeka lapho ezinye izinhlamvu zihlangana ngesiJalimane. Ngemva kokufunda izinhlamvu zesiJalimane, ungaqhubeka nezinye izifundo.
Ungabhala noma yimiphi imibuzo namazwana mayelana nezifundo zethu zaseJalimane kumaforamu e-almancax noma esigabeni sokuphawula ngezansi. Yonke imibuzo yakho izophendulwa ngabafundisi be-almancax.
Bathandekayo, uma ufisa AmaForamu aseJalimane Njengelungu ungabelana ngazo zonke izinhlobo zesiJalimane.
Manje ukuthi ufunda izinhlamvu zamaJalimane Inkulumo ye-artikeller yaseJalimane Ungapheqa isifundo sethu.
Uma ungazi ukuthi yikuphi okulandelayo ozolandela izifundo zesiJalimane Izinkulumo zesiJalimaneUngahlola yethu. Kungenzeka ukulandela izifundo zethu zesiJalimane isinyathelo ngesinyathelo ngale ndlela. Uthathe isinyathelo sokuqala sokufunda isiJalimane.
# I-ALFABE EJERMANE (DAS DEUTSCHE ALPHABET)
# Ukufunda nokubhala amakhodi ngesiJalimane
# Izincwadi ZaseJalimane
# I-German Letter Coding
# Izincwadi ezingekho ku-Alphabet ze-Alphabet ze-German
# I-Alphabet ye-Non-German ku-Alphabet ye-Alphabet
# Ukufunda Izincwadi ZaseJalimane Ngolwazi
# Indlela Yokufunda Amazwi EsiJalimane
Tags: I-alfabhethi yesiJalimane yebanga le-10, 10. inkulumo yesi-German yesifundo, I-alfabhethi yesiJalimane yebanga le-9, 9. inkulumo yesi-German yesifundo, i-alphabet yesi-German, i-abc yesi-German, i-alphabet yesi-German, i-alphabet yesi-German, izincwadi zesi-German, izinhlamvu zesiJalimane pronunciation